Kulan sanadeedkii saamileyda iyo maamulka shirkadda Golis oo maanta lagu qabtay Boosaaso | Golis Telecom Somalia
Kulan sanadeedkii saamileyda iyo maamulka shirkadda Golis oo maanta lagu qabtay Boosaaso
Shirkan oo ah mid sanadle ah islamarkaana ay isku xogwaraystaan maamulka, Guddiga sare ee BOD-da iyo saamileyda shirkadda Golis ayaa lagu qabtay Hotelka International Village ee magaalada Boosaaso.
Shirkan ayaa maamulka shirkadda Golis ee gacanta ku haya shaqada balaadhan ee ay shirkaddu ugu adeegto bulshada uga warbixiyeen saamileyda horumarka ay shirkaddu samaysay sanad kadib shirkii kan ka horeeyay.
Waxaa madasha lagu soo bandhigay waxqabadkii shirkadda mudadaas sanadka ah waxana sharaxaad dheer ka bixiyay Faarax Xaaji Mire oo ah hogaanka xiriirka dadwaynaha shirkadda Golis isagoo xusay in shirkaddu ku jirto dadaal xoogan ayna sii wadayso waxa uuna ka codsaday in saamileydu ay garab istaagaan xiliyada ay xaaladaha adag hor istaagaan hor usocodka shirkadda.
Maareeyaha Guud ee shirkadda Golis Saciid Aadam Axmed ayaa isaguna madasha ka sheegay in isku duubnida shaqaalaha iyo maamulka shirkadda iyo dadaalka la isla wado ay keentay horumarka ay shirkaddu gaartay isagoo kor istaagay faa’iidada usoo xarootay sanadkan shirkadda oo uu xusay inay ka badantahay sanadihii hore taasoo u sababeeyay inay ku timi dadaalka shaqaalaha iyo maamulka shirkadda Golis.
Gudoomiye ku xigeenka Board-ka shirkadda Golis Luqmaan Maxmuud Axmed ayaa dhankiisa ku baraarujiyay saamileyda inay mar walba ka warhayaan shirkadda ayna xiriir dhaw la sameeyaan maamulka si looga warbixiyo halka ay shaqadu marayso.
Qaar Kamid ah saamileyda shirkadda Golis oo kalmado lasiiyay ayaa cabiray sida ay ugu faraxsanyihiin shirka ay la qaateen maamulkooda ugu hawlan shaqada shirkadda Golis iyagoo bogaadiyay waxqabadka shirkadda sanadkii ugu dambeeyay ee madasha lagu soo bandhigay waxayna fikrado horumar dhalin kara usoo jeediyeen maamulka shirkadda Golis.